नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३१ खर्ब, कसकाे कति ? | Jillakhabar.com
नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि, बजार पूँजीकरण ३१ खर्ब, कसकाे कति ?
लगातार नयाँनयाँ रेकर्ड बनाउँदै अगाडि बढेको धितोपत्र बजारमा शेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज पनि दोहोरो अङ्कले बढेको छ । आजको वृद्धिपछि नेप्से नयाँ विन्दुमा पुगेको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अनुसार २८.४६ विन्दुले वृद्धि भई नेप्से दुई हजार ३१५ मा पुगेको छ ।
Previous articleगाेरखाकाे मनकामनामा दर्शनार्थी बढ्दै, दर्शन गरे मनोकामना पुरा हुने विश्वास
Next articleमनाङमा जंगलकाे आगो निभाउन बनाइयाे अग्निरेखा, आगो नियन्त्रण भएन